I-Baddeck Lakeside Home: Buza ngeGalofu eBell Bay - I-Airbnb
I-Baddeck Lakeside Home: Buza ngeGalofu eBell Bay
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguBrad
Amagumbi okulala ayi-3 akumgangatho ophezulu, ikhaya lokuhlamba eliyi-2.5 elinosofa abatsalayo abayi-3 phezu kweBaddeck Bay entle kwiBras D'or Lakes. Yonwabela ibala legalufu elikumgama omfutshane wemizuzu eyi-2 xa uhamba ngemoto, wonwabele ukubona Amachibi kwiveranda yakho ephangaleleyo, uye kubhukuda, okanye uhlale kwi-gazebo ngaselunxwemeni uze ubukele izikhephe zidlula. Ukusetyenziswa ngokupheleleyo kwe-Inverary Inn kwaye kunokuquka igalufa ye-2 eBell Bay Golf Course. Sebenzisa le ndawo isembindini ukuze ubuke iCape Breton Island entle
I-YouTube: Ukuqeshiswa kweChicory kwi-baddeck bay
Ixabiso losuku liquka i-15% HST. Kukho imali yokucoca ebhatalwa kube kanye eyi- $ 180CAD, kunye nemali yeinshorensi ebhatalwa kube kanye eyi- $ 40.25 ngokuhlala ngakunye.
Ukubuka ichibi kwi-Bell Bay Golf Course kunye nemizuzu eyi-45 xa uhamba ngemoto ukuya kwi-World Class golfing eyongezelelweyo kwi-Cabot Cliffs, i-Cabot links, kunye ne-Highland links.
IBaddeck isembindini weCape Breton Island, ekujongwa njengesiqalo nesiphelo seCabot Trail edumileyo ehlabathini. Ukuzolula kunxweme lweBras d'Or Lakes entle, iBaddeck yilali entle enezinto ezininzi ezinomtsalane neevenkile zokutyela ezintle zokonwabisa wonke umntu.
I-Baddeck inento elungiselelwe bonke abahambi. Ukusuka kwi-spa, ukutya okumnandi, ukunyuka intaba, kunye nokuhamba ngesikhephe-ilali iza kukuvuyisa ngembonakalo yayo ekhethekileyo. Ukutya okumuncis 'iintupha kunokufunyanwa kwiivenkile zokutyela ezininzi ezinento yonke ukususela kwilobster yethu edumileyo ehlabathini ukuya kwikomityi ephithizelayo yokutya kwaselwandle okanye izinto ezibhakiweyo ezenziwe ekhaya. Yonwabela iivenkile ezikhethekileyo ngoxa ubuka iivenkile, iivenkile, iigalari, nokunye okuninzi.
Ngoxa utyelela iBaddeck, sebenzisa eli thuba kwizinto ezininzi zolonwabo, eziquka ukuhamba ngesikhephe, ukudlala igalufa, ukunyuka intaba, ukubuka iindawo, ukutyibilika ekhephini, ukutyibilika ekhephini, nokunye. Chitha ingokuhlwa ukonwabela ukuzonwabisa kwasekuhlaleni kwisilingi, kunye neekonsathi ezifumaneka kwiindawo ezininzi edolophini.
Umphathi we-Resort kwi-Inverary Inn uza kukulawula ukubhukisha kwakho njengoko kuvunyelenwe ngokubhukisha nge-imeyile xa ukubhukisha kuqinisekisiwe kwaye uza kufumaneka kuzo naziphi na iingxaki ezinokuvela.